Aung San Suu Kyi | Freedom News Group
2 Comments	EU to urge Myanmar to allow Aung San Suu Kyi to seek presidency
EU member states will urge Myanmar’s former military rulers to change the country’s constitution and electoral laws to allow Nobel laureate Aung San Suu Kyi to run in 2015 presidential elections. Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	May 29
3 Comments	ဒီမိုကရေစီက နုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် (ဘေးမှရပ်ကြည့်မနေနိုင်တော့သည့်လူတစ်ယောက်၏ အထူးစိုးရိမ်သောက) – ကျော်ဝင်း
by Kyaw Win on Friday, June 15, 2012 at 12:06pm
မြန်မာ့နွေဦး အခါလည်ကျော်လာသည်နှင့် ဘေးမှရပ်ကြည့်နေမြဲ စာရေးသူမှာ၊ ရင်မ နေရတော့သည်။ Read more
19 Comments	ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ၏ အထ္တုပတ္တိ စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေမည်
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံ ၏ အမြင့်
ဆုံး အာဏာ ကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သည် ၎င်း ၏
ဘ၀ ဖြစ်စဉ် အား မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း ရှိ နာမည် ကျော် စာရေး ဆရာ အချို့နှင့် တိုင်ပင် ပြီး
ရေးသား လျှက် ရှိကာ မကြာမှီ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ် နေသည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 26
The luxury crystal and jewellery house Swarovski was among two dozen European companies that recently visited Burma onacontroversial business trip that activists say broke the spirit, if not the letter, of recently renewed EU sanctions. Read more
1 Comment	နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများ လွှတ်ပေး ရန် တောင်းဆို ပြီ
အကျဉ်းထောင် တွေ ထဲ မှာ စစ်အစိုးရ ရဲ့မတရား ဖမ်းဆီး အကျဉ်း ချထားခြင်း ခံရတဲ့ နိုင်ငံ ရေး
အကျဉ်းသားတွေ အမြန် ဆုံး လွှတ်ပေး ဖို့ပြည်တွင်း လှုပ်ရှား မှု အဖွဲ့တွေ နဲ့နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်း
သား မိသား စု တွေ က မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှာ အရပ်သား အစိုးရ အသွင် ဟန်ဆောင်
ထားတဲ့ စစ်အစိုးရ ကို တောင်း ဆို လိုက်ပါတယ်။ Read more
2 Comments	ကဒါဖီ လည်း အမိုးဖွင့် ကား နဲ့ သင်္ကြန်ကျ
Gaddafi Sunroof Parade Stunt Copycat from Burma Dictator Than Shwe.
ကဒါဖီ မြို့ တွင်း လှည့်လည် ပုံ ကို SKY News ဗီဒီယိုတွင်ကြည့်ရန် ကဒါဖီ ဟာ မြို့ တွင်း ကို လှည့်လည် တုန်း မှာ စစ်ကားတောင် အသုံး မပြု ရဲ ပဲ ဦးထုပ် ကြီး ဆောင် ပြီး
ရုပ်ဖျက်ကာ နေတိုး တိုက်လေယာဉ် တွေ ကို အာခံ ပြခဲ့ပါတယ်။မနေ့ က ဘာလင်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ နေတိုး
အစည်း အဝေး မှာ ကဒါဖီ ကို အမြန်ဆုံး အာဏာစွန့် လွှတ် ဖို့ နဲ့တိုင်းပြည်က ထွက်ခွာဖို့ တိုက်တွန်း
ထားပါတယ်။ Read more
1 Comment	မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ဆင်းရဲ/ချမ်းသာ ကွာဟ မှုကြီး မားနေ
သက်ကြီး ရွယ် အို များ လည်း စားဝတ်နေရေး အတွက် မရပ်မနား သက်မွေး ၀မ်းကျောင်းနေရ ဟိန်းခိုင်ထွန်း။ ။မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာမှု ကွာ ဟာချက် မှာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ် နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး
ရန်ကုန် အဖွဲ့ က ခန့် မှန်းထား သည့် Poverty Line ထက် ပင် ကွာ ဟ နေကြောင်း ယခင် သ
တင်း ပတ် က မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန် မြို့ သို့ သွား ရောက် လည် ပတ် ခဲ့သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံ
ယေးလ် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ တစ်ဦး က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။ Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,727,886 hits